Sida loo muujiyo soo galida shabakad WiFi ah oo furan ama furan | Androidsis
Sida loo muujiyo shaashadda galitaanka ee shabakadaha WiFi ee furan ee Android
ka Shabakadaha dadweynaha ama furan ee WiFi had iyo jeer uma shaqeeyaan sidii la rabay, sidaa darteed bartayada 'Android terminal' si aan u tusno shaashadda galitaanka markasta oo aan u baahanahay, waxay noqon kartaa dhibaato guud.
Laakiin waxaa jira xalal kuwaa gasho shabakadaha WiFi ee dadweynaha in xiriirkeedu uusan si sax ah u fureyn ama uusan noo oggolaaneyno inaan galno aqoonsiyada maxaa yeelay ma aqaano dhibaatada kumbuyuutarka iyo wixii la mid ah. Waxaan hoos ku xallin doonnaa si aanad wax dhibaato ah ugu qabin gelitaanka kuwa WiFi furan ama furan.
1 Shabakadaha WiFi ee dadweynaha
2 Sida loo muujiyo gelitaanka shabakadda WiFi ee dadweynaha
Shabakadaha WiFi ee dadweynaha
Haddii aad tagto suuq weyn, hubaal Waxaad u adeegsaneysaa WiFi-ga ay leeyihiin dadweynaha si aad ugu dhex socoto isla adigoon dinaar ka bixin xogta moobiilka aad jeceshahay. Xaruntan dukaamaysigu waxay bixisaa marin marin oo aan ka gudubno si aan u galno oo aan awood ugu yeelano inaan u dhex maro ama si fudud ugu xirno shabakadda WiFi.
Waxa dhacaya ayaa ah in mararka qaar xayeysiisyadan aysan si sax ah u shaqeynin, cilad la xiriirta isla termalka ama iswaafajinta X, waxaana nalooga tagay rabitaanka inaan isku xirno. Waxaan ula jeedaa, waad awoodaa arag ogeysiiska "Gal shabakadda WiFi", laakiin inta asxaabtaadu isku xirmayso si ay uga faa'iideystaan ​​megabeytyada bilaashka ah, waxaa lagaa tagay wejiga «maxaa dhacaya?
Si loo xaliyo dhibaatadan "aad u daran", waxaan la wadaageynaa barnaamij sifiican u shaqeeya taasna waxay naga caawinaysaa inaan beddelno hudheelkaas, makhaayadda, bogga laga soo galo garoonka ... Waxaannu tan u samayn doonnaa si aannu u xallinno dhibaatadan halista ah ee awood u la'aanta ku xirnaanta WiFi-gaas furan.
Sida loo muujiyo gelitaanka shabakadda WiFi ee dadweynaha
Waxa ugu horeeya ee aan sameyneyno waa in la rakibo barnaamijka 'WiFi Portal Opener app' in aad hoos ka soo dejisan karto:
Furitaanka Xariirka 'WiFi Portal'
Waa bilaash, markaa waad awoodi doontaa inaad u adeegsato dhibaato la'aan runtiina waxay tahay inay soo dhaweyn weyn u heshay adeegsadayaal badan.
Hadda waxaan ku rakibnaa dalabka la yiri.
Waan soo laabaneynaa inaad isku daydo inaad ka soo gasho xariirka bogga WiFi in aan isku dayno in aan ku celcelino dhibaatada aynaan u lahayn login.
Haddii aan dhibaatooyin leenahay, markaa waxaan horay u qaadnay oo fureynaa Wiilka Portal Opener.
Runtii waxaan wajaheynaa biraawsar shaashadda xamuul ah galitaanka bogga.
Waxaan galnaa aqoonsiga koontada iyo lambarka sirta ah ee ay bixiso aasaaska halka aan joogno.
Ka dib markii aan soo galnay barnaamijka, waxaad u muuqan doontaa inaad ku xiran tahay internetka si aad ugu sii wadato isticmaalkaaga caadiga ah ee barnaamijyada, shabakadaha bulshada iyo in ka badan.
Marka waxa aan sameyno waa taas, markaan aragno astaanta isku xirka shabakadda WiFi, laakiin ma aanan awoodin inaan aadno bogga galitaanka, waxaan fureynaa barnaamijkaan waana haysan doonnaa in la isku xiro oo sidaas loo sameeyo nolosheena dhijitaalka ah ee caadiga ah.
App ah oo kaliya Waxay noo adeegi doontaa daqiiqado gaar ah, maaddaama sida caadiga ah macangagyada shabakadahaas WiFi guud ay badanaa shaqeeyaan. Laakiin haddii tani aysan ahayn kiiska, in barnaamijkan la rakibo wuxuu ku imaan karaa si loo xalliyo dhibaatadan. Xaqiiqdii, xitaa waan ku rakibi karnaa xogteena, tan iyo markaas waan ku faraxsanahay markaan cuno megabeytka iyada oo loo marayo shabakada WiFi ee xarunta dukaameysiga, garoonka diyaaradaha ama maqaayada.
Hab xiiso leh oo looga baxo jidka duruufahaas oo aanan dooneynin inaan wajahno markay dhacaan, laakiin marar badan aan si lama filaan ah ugu dhufanno. Haddii aadan wax ka ogeyn WiFi Portal Opener, waxaad horeyba u haysatay qalab kale si aad u xalliso dhibaatooyin badan taleefankaaga gacanta ee Android. Hada waad ka eegi kartaa saaxiibkaa kor ilaa hoose markuu ku maadeystay daqiiqadaas markii aad cuni kari weyday megabeyt bilaash ah Dabcan, xusuusnow in dhamaan boosteejooyinka laga yaabo inaysan shaqeyn, sida soo-saaraha ay ka digeyso. Waxaan kaaga tagi doonaa taxanahan tilmaamaha ah si nabadgelyo leh loogu dhex maro shabakadaha dadweynaha iyo kuwa furan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo muujiyo shaashadda galitaanka ee shabakadaha WiFi ee furan ee Android
Sidan ayey Google ugu dabaaldegtaa "dhimashadii" alaabooyin badan oo ay u sameysay Halloween